China 3T tube ice umshini ifektri kanye nabaphakeli | Izinhlelo ze-Herbin Ice
Amandla agijima: 9.375 KW.
Umthamo wokukhiqiza weqhwa nsuku zonke: ama-3000 kgs wamashubhu e-ice ngamahora angama-24.
Ake sibale ngomshini weqhwa le-3T / day tube.
Ngakho-ke nsuku zonke, umehluko wokusetshenziswa kukagesi yi-30x3 = 90KWH.
(105-75) x 3 x 365 x 10 = 328,500 KWH, lowo umehluko wokusetshenziswa kukagesi eminyakeni eyishumi.
Uma amakhasimende ekhetha umshini wami we-3T / day tube ice machine, bazonga u-328,500 KWH kagesi eminyakeni eyishumi.
Uma ikhasimende likhetha omunye umshini weqhwa wobuchwepheshe obumpofu, uzosebenzisa imali ethe xaxa ukukhokhela lokho kusetshenziswa kwamandla kagesi okungekho okungenamqondo, ama-328,500 KWH.
Ungakanani ugesi wama-328,500 KWH ezweni lakho?
Ugesi ongu-328,500 KWH cishe u-US $ 45,000 e-China.
Langaphambilini 2T flake ice umshini
Olandelayo: Umshini weqhwa le-5T